စန်ကာကူကျွန်းအငြင်းပွားမှု Disputes about the causes
ဓမ္မပဒ 2. Mental perception is the lead in mind that causes everything to happen. It is founded on our thoughts. Our life is the creation of our mind which is supreme. If one speaks or acts or plans with pure mind, joy and peace will follow likeashadow that never leaves the body.
စန်ကာကူကျွန်းအငြင်းပွားမှု There are disputes about the causes of controversy involving the Senkaku Islands. For example, some use the term "territorial dispute"; however, the Japanese government has consistently rejected this framing since the early 1970s. An analysis of incidents and issues require distinguishing between disputes which are primarily over territory and those which merely haveaterritorial component.
အဒမ်စမစ် သူ၏အဓိက ဘောဂဗေဒဟာအုပ်ဖြစ်သော နိုင်ငံများ၏ ဥစ္စာဓနသဘာဝနှင့် အကြောင်းရင်းများ လေ့လာခြင်း (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) ကို ၁၇၇၆ ခုနှစ်၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုကျမ်းကို နိုင်ငံများ၏ဓန (Wealth of Nations) ဟု အတိုကောက်သိကြသည်။ ထိုစာအုပ်ကြီး မှာ ဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ စာအုပ်များထဲတွင် အကောင်းဆုံးသော စာအုပ်ဖြစ်သည်ဟု တန်ဖိုးဖြတ်ကြသည်။ ထိုစာအုပ်တွင် လွတ် လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှုကို ထောက်ခံရေးသားထားလေသည်။ ထိုပြင် ထိုစာအုပ်သည် ဘောဂဗေဒပညာရပ်အတွက် အလွန်ပင် အရေးပါ အရာရောက်လှ၏။ ဘောဂဗေဒကို သီးခြား သိပ္ပံ ပညာရပ် အနေဖြင့် ထားထိုက်ကြောင်းကိုလည်း အကြောင်း ပြထားလေ၏။